Fivoriamben’ny Vondrom-paritry ny Vavolombelon’i Jehovah 2022
KATSAHO NY FIADANANA!
Asainay ianao hanaraka ny fivoriambenʼny vondrom-paritra telo andro ataonʼny Vavolombelonʼi Jehovah.
Halefa ao aminʼny jw.org io fivoriambe io aminʼity taona ity, satria mbola miparitaka ny COVID-19. Havoaka tsikelikely aminʼny Jolay sy Aogositra ny fandaharana.
Maimaim-poana. Tsy mila mamorona kaonty na misoratra anarana.
Fandaharana Zoma: Ho hitantsika hoe hiadan-tsaina sy hihavana amin’olon-kafa isika raha manam-pitiavana. Ho hitantsika koa hoe hoatran’ny sarintany ny Baiboly, dia ny torohevitra ao no lalana hahatonga ny mpianakavy hihavana sy hifankatia.
Fandaharana Asabotsy: Mbola hiadan-tsaina ve isika raha marary, na sahirana ara-bola, na tratran’ny loza araka ny natiora, na manana olana hafa? Hisy video hampiseho amintsika hoe inona no ataon’ny olona samihafa eran-tany mba hiadan-tsaina foana.
Fandaharana Alahady: Mandeha ho azy ve ny hoe minamana amin’Andriamanitra sa misy zavatra tokony hataontsika? Hamaly an’izany ilay lahateny ara-baiboly hoe “Azo Atao ve ny Minamana Amin’Andriamanitra?”
Jereo ny fandaharam-potoana sy ny video momba ny fivoriambenay.
Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah 2022: Katsaho ny Fiadanana!
Mety hahatonga antsika tsy hilamin-tsaina ny olana mahazo antsika amin’izao. Asainay ianao hanatrika an’ilay fivoriambenay hoe “Katsaho ny Fiadanana!” satria hazavaina mandritra an’io fivoriambe io hoe afaka ny hiadana sy hilamin-tsaina isika dieny izao sy amin’ny hoavy.
Video Fampahafantarana: Mitarika Antsika ho any Amin’ny Fiadanana i Jehovah
Nanatanteraka tsikelikely ny teniny i Jehovah ary mitarika ny vahoakany ho any amin’ny fiadanana. Jereo ato hoe ahoana no nanaovany an’izany.
Hoatran’ny Ahoana ny Fivoriambenay?
Manao fivoriambe mandritra ny telo andro ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany isan-taona. Hoatran’ny ahoana marina ny fivoriambenay? Tongava manatrika dia ho hitanao!
Hizara Hizara Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah
Jereo ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2022 hoe “Katsaho ny Fiadanana!”